Maize (ပြောင်းဖူးတွင်ပါဝင်သော အဟာရများ) | Moe Naymin
Maize (ပြောင်းဖူးတွင်ပါဝင်သော အဟာရများ)
Maize contains rich in Carbohydrates, protein , iron, corn oils , antioxidant , vitamin C, thymine ,carotenoids , bioflavonoid ,copper, ferulic acid , vitamin K , phosphorus minerals and vitamins
The non-sifted maize is particularly nutritious because the germ has not been removed. It is highly nutritious and beneficial to the body. The endosperm is the energy store house. It is packed with high calories.
Maize of course has other uses. In other countries, it is used to make corn oil. Corn oil is mono unsaturated oil that is beneficial to the body. The oil isagood antioxidant and does not solidify at room temperature; hence does not cause have cholesterol found in animal fats. Corn flakes are made from corn (corn is same as maize). Corn flakes are highly nutritious andagood source of energy and vitamins.
13.Skin Benefits of Corn:
Corn isagood source of several vitamins including vitamin C, thiamin and niacin, as well as minerals and antioxidants which play an important role in skincare. Given below are the benefits of corn for skin.
14.Hair Benefits of Corn:
Regular consumption of one cup of corn strengthens the hair follicles as it contains potent antioxidants like vitamin C and lycopene which assist in collagen production, thus maintaining smooth hair. Corn oil is particularly beneficial for adding sheen to your hair and numerous other hair care benefits given below.
4. Causes Bloating And Flatulence:
5. Causes Indigestion And Stomach Upset:
6. Causes Intestinal Irritation And Diarrhea:
7. Causes Tooth Decay:
Corn containsagood amount of sugar, so it can lead to tooth decay in some people. This isarelatively rare side effect of corn, but not one that should be taken lightly! Make sure you followagood oral hygiene and brush your teeth after eating corn.
8. Increases Weight:
9. Leads To Lethargy:
ပြောင်းဖူးတွင် ကစီဓါတ်၊အသားဓါတ်၊ သံဓါတ်၊ ပြောင်းဖူးဆီ၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်၊ carotenoids , bioflavonoid,copper, vitamin K ,ferulic acid, thymine, phosphorus နှင့် အခြားသော နုပျိုစေသော ဓါတ်များပါဝင်ပါသည်။
ကစီဓါတ်များသော အစားအစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောင်းဖူးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်များကို သွေးတွင်းသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောင်းဖူးစားသောအခါမှာ သင်ကတစ်နေ့လုံး အားရှိပြီး တတ်ကြွသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းဖူးသည် သံဓါတ်၊ ဆိုဒီယမ်ဓါတ်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် အနည်းငယ်ပါဝင်ပါသည်။ ကလေးငယ်တွေကို နို့ပြီးလျင် အစားထိုးဖြည့်စွက်စာသည် ပြောင်းဖူးသာဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းဖူးထဲတွင် ပါဝင်သော ပြောင်းဖူးစေ့သည် စွမ်းအင်အဓိကထုတ်ပေးသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းဖူးကို တစ်ချို့သော နိုင်ငံများတွင် ပြောင်းဖူးဆီအဖြစ် အဓိကအသုံးပြုကြပါသည်။ ပြောင်းဖူးထဲတွင် ပါဝင်သော မပြည့်ဝဆီတစ်မျိုး (mono unsaturated oil) သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လွန်စွာအသုံးဝင်ပါသည်။
၁။ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း
ပြောင်းဖူးသည် အစာခြေဖျက်မှုတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သော အမျှင်များနှင့် မပျော်ဝင်နိုင်သော အမျှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်များသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ကိုလတ်စထရောဓါတ်များ စုပ်ယူခြင်းကို တားမြစ်ပြီးတော့ မပျော်ဝင်နိုင်သော အမျှင်များသည် ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် အူနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများ ဖြစ်သော ၀မ်းလျှောခြင်း၊ ၀မ်းပျက်ခြင်း နှင့် အူရွေ့ရှားမှုမမှန်ခြင်း ရောဂါများကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ ထို့အပြင် အူမကြီးကင်ဆာနှင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါများကိုလည်း ၀မ်းပုံမှန်သွားစေခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါသည်။
၂။ သွေးအားနည်းရောဂါကို ကာကွယ်ခြင်း
ဗီတာမင် B12 နှင့် Folic acid တို့ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော သွေးအားနည်းရောဂါများ ၊ သံဓါတ်အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော သွေးအားနည်းခြင်းမျာကိုလည် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အထက်ပါ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကစီဓါတ်အလွန်များစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်များကို နှေးကွေးစွာထုတ်ပေးပါသည်။ စွမ်းအင်ပုံမှန်ရရှိခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းများသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောင်းဖူးကို အားကစားသမားများ စားသုံးသင့်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီ ၂နာရီခန့် အလိုတွင် ပြောင်းဖူးစားခြင်းက ကောင်းမွန်သောအလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၄။ LDL ကိုလတ်စထရောများကို လျော့ချပေးခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကောင်းသော ကိုလတ်စထရော (HDL) နှင့် မကောင်းသော ကိုလတ်စထရော (LDL) နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ LDL ကိုလတ်စထရောများသည် အဆီများသော အစားအစာများ စားသုံးခြင်းကြောင့် တိုးပွားလာပါသည်။ ၄င်းသည် နှလုံးအားနည်းစေပြီး နှလုံးနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ ပြောင်းဖူးတွင် ပါဝင်သော vitamin C, carotenoids နှင့် bioflavonoid တို့သည် နှလုံးကို ကျမ်းမာစေပါသည်။ ပြောင်းဖူးသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ LDL စုပ်ယူမှုကို လျော့ချစေခြင်းဖြင့် သွေးတွင်းရှိ LDL များကို လျော့ကျစေပါသည်။
ပြောင်းဖူးသည် အလွန်ပိန်သေးနေသူများအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ပြောင်းဖူးတွင် ပါဝင်သောဓါတ်များ အထူးသဖြင့် ကစီဓါတ်များနှင့် အခြားသော သတ္တုများကြောင့် ပိန်နေသူများအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်အလျင်အမြန်တတ်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
၆။ ဆီးချို သွေးချိုနှင့် သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်ပေးခြင်း
သဘာဝ သစ်သီး၊ သစ်ရွက်များနှင့် ပြောင်းဖူးကဲ့သို့သော အရာများသည် ဆီးချိုရောဂါ လက္ခဏာများကို သက်သာစေပါသည်။ ပြောင်းဖူးစေ့ သို့မဟုတ် ပြောင်းဖူးသေးသေးလေးများကို ပုံမှန်စားသောက်လျင် အင်ဆူလင်ကြောင့်မဟုတ်သော ဆီးချိုရောဂါကို အထိုက်အလျောက် သက်သာစေပါသည်။ phenolic phytochemicals ပါဝင်ခြင်းက သွေးတိုးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Phytochemicals များသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကို အင်ဆူလင်ဓါတ် စုပ်ယူခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါသည်များ ဖြစ်လေ့ရှိသည် ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အစာအလွန်အမင်းစားချင်ခြင်း စသည်များကို ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ adrenal glands ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြောင်းဖူးက ကူညီခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ကျစေပါသည်။
၇။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကြွက်သားနှင့် အရိုးများကို သန်မာစေခြင်း
ပြောင်းဖူးတွင် ပါဝင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓါတ်သည် အရိုးနှင့် ကြွက်သားများကို သန်မာစေပါသည်။ ထို့အပြင် မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် သွေးတွင်းရှိအချိုဓါတ်များကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။ ပြောင်းဖူးတွင် copper နှင့် phosphorus များလည်း ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အရိုးကိုသန်မာစေပါသည်။
အ၀ါရောင်ရှိသော ပြောင်းဖူးစေများတွင် carotenoids ပါဝင်ခြင်းကြောင့် မျက်လုံးအတွင်းရှိ Macular cell များ ပျက်စီးခြင်းကို အတော်အသင့် တားဆီးပေးပါသည်။ Beta-carotene သည် ဗီတာမင် အေ ထုတ်ယူခြင်းကို အားပေးခြင်းကြောင့် အမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေပါသည်။
၉။ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
လေ့လာချက်များအရ ပြောင်းဖူးသည် free radicals ကြောင့်ဖြစ်သော ကင်ဆာရောဂါအမျိုးအစားကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကုသနိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ferulic acid သည် ရင်သားနှင့် အသည်း တို့တွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော အလုံးအကျိတ်များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် အလွန်အရေးပါ ပါသည်။
၁၀။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် ကောင်းကျိုးများ
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓါတ် အများအပြားပါဝင်ခြင်းကြောင့် ၄င်းဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသော ကလေးကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း ၊စသည့် အရာများကို တားဆီးပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း သွေးတိုးရောဂါရှိလျင် (သို့မဟုတ်) ခြေလက်များ ဖောနေလျင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှသာ ပြောင်းဖူးစားသင့်ပါသည်။
ပြောင်းဖူးဆီသည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကိုလတ်စထရောများကို လျော့ကျစေခြင်းကြောင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အိုမီဂါ ၃နှင့် တွဲပြီး သွေးလွှတ်ကြောထဲတွင် အလိုအလျောက်သွေးခဲခြင်းကို တားဆီးပေးခြင်းကြောင့် သွေးတိုးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၁၂။ သူငယ်ပြန်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
thymine ဓါတ်သည် ဦးနှောက်ဆဲလ်များနှင့် မှတ်ဥာဏ်များအတွက်လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို အဓိက ပေးစွမ်းပါသည်။ ၄င်းသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိ ဆဲလ်များ နှင့် အာရုံကြောတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေးပို့သော ကြားခံနယ် acetylcholine ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကလိုအပ်သော အရာဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ အရေပြားအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း
ပြောင်းဖူးတွင် ပါဝင်သော vitamin C, thiamin , niacin , သတ္တုဓါတ်များ ,antioxidants များသည် အရေပြားအတွက် အဓိက ပါဝင်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းဖူးသည် အရေပြားအလှအပကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ beta-carotene,Vitamin C နှင့် lycopene တို့သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ UV နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ ၀င်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးကူညီခြင်းကြောင့် အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွတ်စေပါသည်။ အရေပြားယားခြင်း ၊ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းများကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။
vitamin C နှင့် lycopene သည် ဆံကေသာကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။ ဆံကေသာခြောက်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းများကို ဗီတာမင် အီးနှင့် fatty acids တို့က ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပြောင်းဖူးဆီကို ဆံကေသာကိုလိမ်းခြင်းဖြင့် ဆံကေသာခြောက်ခြင်း၊ ဆံကေသာကျိုးခြင်းများအတွက် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပြောင်းဖူးတွင်ပါဝင်သော ဗီတာမင်ကေသည် ကယ်ဆီယမ်ဓါတ်ကို စုပ်ယူခြင်း အားကောင်းစေခြင်းကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။
ပြောင်းဖူးသည် အချို့သောသူများတွင် ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဓါတ်မတည့်လျင် အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ခြင်း နှင့် အန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အချိုဓါတ် အလွန်အမင်း ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆီိးချိုရောဂါရှင်များသည် ပြောင်းဖူးစားလျင် သတိထားစားသင့်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသာ ဆီးချိုရှင်များ ပြောင်းဖူးစားသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ့်သဘောနှင့်စားလိုလျင် အနည်းငယ်သာ စားရပါမည်။ ပြောင်းဖူးသည် ကစီဓါတ်အလွန်အမင်း ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ရင်ပြည့်ခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း၊ လေပွခြင်းများကို ဖြစ်စေပါသည်။ ပြောင်းဖူးကို အလွန်အမင်းစားလျင် ပြောင်းဖူးတွင် ပါဝင်သောအမျှင်ဓါတ်များသည် အစာအိမ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အမျှင်ဓါတ်များသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အလွန်များလျင် ၀မ်းလျောတတ်ပါသည်။ ပြောင်းဖူးတွင် ပါဝင်သော အချိုဓါတ်များသည် လိုအပ်သည်ထက်လွန်ကဲပါက ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တတ်စေပါသည်။ ကစီဓါတ်ကို အများအပြားစားသုံးလျင် ခေါင်းဝေပြီး အသက်သေသည်အထိ အန္တရာယ်ရှိစေပါသည်။ သို့သော် ကစီဓါတ်လွန်ကဲ၍ သေသောသူသည် လက်တွေ့ဘ၀တွင် မရှိပါ။